What Can We Learn About Chikapa - Chombo Chemukadzi - Matinji Anoita Basa Rei? What Can We Learn About Chikapa - Chombo Chemukadzi - Matinji Anoita Basa Rei?
What Can We Learn About Chikapa - Chombo Chemukadzi - Matinji Anoita Basa Rei?
Mubvunzo wekuti “Matinji anoita basa rei unobvunzwa kuda katatu pavhiki imwe neimwe. Regai tiwedzere pane zvatakambotaura, kuda zvingabatsira vamwe vanongoramba vachibvunza.
Kana uri munhukadzi uchishamisikawo kuti pamberi pako pakamira sei, tora MIRROR uise pasi wotonona wakanangisa pamberi pako pa MIRROR, wozviongorora kuti pako pakaira sei.
Wotarisa zvinhu zvakati wandei zvinoti:
1. Bhinzi yako
2. Buri rako reweti
3. Matinji ma lips asina choya akaurungana
4. Maromo akaita chikomo ane choya
Chitubu-Buri guru panobuda ropa kana uri kumwedzi. Ndipo pachapinzwa chombo nomurume kana wakura. Ndipozve pauchazvara mwana napo. Panokura zvokuti musoro nemafudzi emwana zvinokwana. Kozotiwo buri rinobuda netsvina kana waenda kuchimbuzi. Riri pedo pedo nechitubu chako (2cm kana usina kumbozvara, 3.5 kana wambozvara)
Pamberi: Pamberi pemunhukadzi pane maromo anova makuru pamatinji. Maromo anomera choya. Matinji haameri choya. Choya tinogera hedu asi basa racho kudzivirira guruva kuti risapinda pamberi nokuti rinokwanisa kuva nezvigwere. Mazuvano tinopfeka mabhurugwa, saka choya tofarira kugera zvokutoveura.
Maromo akaita se chikomo mubani zvokuti kukura kwawo ndiko kunoitira kuti chitubu chigare chakavharika kusvika chapindwa nechombo. Kuvharika uku kwakanakira kuti zvigwere zvisapindamo.
Maromo nematinji zvese zvakavaka pamberi uye zvese zvinoita chitubu chigare chakavharika kuti kusangopinda zvinhu.
Ndipo patinotangirawo nyaya yematinji. Matinji anovhara buri reweti kuti risapindwa nezvigwere zvinobva kuzhe. Haavhari buri rinopinda chombo riri nechezasi zvisinei kuti wakadhonza matinji akareba here kana kwete. Matinji makuru kuno musoro kwakananga kubhinzi uye mapfupi chose kuzasi unopinda chombo pakuiswa nomurume.
Kunaka: Matinji anoti kana akakwizirigwa zvinyoronyoro, anotanga kuzvimbirira, obudisa oiri yakatsetseka chose chose inotsvedza. Oiri iya yonyorovesa matinji zvese nepamberi pese. Kana murume opinza chombo kana kungokwizirira pamberi pese nechombo zviya zvokukunyemudza zviya zvinoitwa muchimbotamba, matinji anozvimba owedzera kubuda oiri iyoyo.
Matinji ane ma NERVES anonakidza murindzi kana achipurudzigwa kana kukwizirigwa nomurume wake. Zvinonaka chose, zvikuru kana murume achihwisisa kuti kumusoro kwakananga kuguvhu kune bhinzi inova yakangoisigwapo kuti muridzi wayo anakigwe chete chete kana ichitambwa nayo nomurume. Matinji akabatana kuno kubhinzi kwaanosangana achiperera pakuva chinyama chakafukidza bhinzi kana isina kumira. Kufukidzwa kuitira kuti isakuvadzwa nokukweshana nenhumbi dzokupfeka nokuti ine maNERVES akawandisa.
Matinji anobudisa mushonga unouraya ma BACTERIA akawanda asiri epamberi saka zviri nani kuti napo napo womboitawo zemo oiri iwande kubuda zvinova zvinotapudza maBacteria
Pakunyorovesa pamberi matinji anobatsira kuti pakupinzwa chombo zvisagwadza mese murume nomukadzi. Matinji ane maNERVES akawanda chose anobatsira pakunakigwa kwemukadzi pakuiswa nomurume kana pakungozvikwizirira matinji nebhinzi yake ega pasina murume.
Kumurume anohwisisa nyaya yematinji nemabatigwe awo, anopedza nguva aripo pamatinji nebhinzi uye kuti kana akawana mukana wekuramba achikwizirira apinza chombo zvinonakira mukadzi chose.
Iyewo mukadzi anokwanisawo kuti uku ari kuiswa nomurume, uku ari kuzvikwizirirawo matinji nebhinzi. Murume anopinza chombo mukati memukadzi asi pamukova wechitubu ndipo pane ma NERVES akawanda kupfuura mukati saka pakukoirana mukadzi anonakigwa nokukwiziwa kwekwakananga kumukova kupfuura zviri kuitika mukati. Ndizvo uchiona kuti pakuiswa nomurume bhinzi ikashandwa zvinonaka kupfuura kunaka kwechombo chiri mukati icho.
Asizve chombo manakire acho akasiyanawo haho neebhinzi nematinji uye unenge wava kungodawo kupinzwa chombo uye kuhwa murume achikukoira zvinonaka. Kuzivawo kuti une murume mukati zvinonakawo manakire azvo. Asi bhinzi inonaka zviri mberi, zvikuru ikanananzviwa norurii. Zvinokasirisa munhukadzi kutunda.
Kukura kwematinji: Matinji haana vasa kuti makuru here kana kuti madiki. Kunaka kwawo kumukadzi kwakasiyana siyana zvichibva mumafungire emukadzi pakuiswa kwake kwete kuti zvinobva pasaizi yematinji. Bodo.
Kuvakadzi vakawanda chose chose mhomho yenyika dzese dzevanhukadzi, matinji ari kuno kumusoro kwakananga kuhinzi. Akafukidza buri reweti kwete buri rinopinda chombo. Chero ukadhonza matinji haasvikiko zasi uko saka matinji haabati chombo pakuiswa. Kana wakafongora zvakanaka ndipo kaunohwa kurohwa rohwa nemabhora emurume pamatinji achikukoira. Zvinonaka futi izvozvo.
Kana waka pakachigwa makumbo ako pamafudzi emurume zvinokwanisika kuti choya chemurume chikwiizirire matinji ako zviwedzere kunaka.
Asi chikuru ndechokuhwisisa kuti mukadzi ngaasaregeregwa matinji ake nomurume wake. Ratidza murume mabatire aunoda kuti matinji ako aitwe uye kuti nguva yakareba zvakadii kuti unakigwe. Kana uchisvoda kumuudza ingotora ruoko gwake uisepo pamberi womuti kwenya nokuti pari kuvava. Kukwenyewa nomurume pasingambovavi kunonaka chose saka jaidza murume kugarokukwenya pamberi chero makagara muchiona henyu TV yenyu yemubhedroom. Jaidza murume kuziva ziso riya rokuti ukamupa anongoziva ega kuti zasi kunoda zvakunoda.
Akagarokwenya anojaira kuti zvinonaka ndazvipi nemaitire ako ekuwedzera kupatsanisa makumbo uye kusimudzira chiuno kuti adzire zasi kuburi rechombo, kana kuti akwire kuno kubhinzi.
Varume vakawanda vanogarobvunza pano kuti matinji anoita basa reiko. Matinji anonaka kubatwa veduwee, batai nokutambisa matinji evakadzi venyu mudzimba. Isuwo ngatiwedzere kudzidzisa varume vedu kuita nguva vari pamatinji nebhinzi vachiitawo zvavanodapo nemaoko. Kuzopinzawo chombo zasi chava chimwe chinhanho chokunakigwa uye kutiwo iye murume ahwe pane moyo.
Kutunda kwemukadzi: Vakadzi vanokwanisa kuita ORGASM NOKUPINZWA CHOMBO vashomanana kuma 30% mupasi rese. Asi vanoita nokuda kwekutambiswa matinji nebhinzi vakawanda chose. Varume mukadzidza kuita zvese munenga magona chose. Kuti uku uri mukati uri kukoira uku uri kukwizirira matinji nebhinzi ndizvo chaizvo kana maitire achibvumdza. Iwewo muridzi wematinji, kana murume achishanda, fungwa yake yese iri pakunakigwa kwake, Isa maoko ako pakati uzvishande pamatinji ako. Kana wakafongora, unokwanisa kusvitsa ruoko pamatinji, zvinova zvinokuwedzera kufongora wotohwa chombo chomurume chogofa panga pasina kujaira kugofewa zvotowedzera kunaka.
Kunakigwa kwemurume nomukadzi: Ngatihwisisezve kuti hakuna mukadzi asina matinji. Kungosiyana saizi chete asi kuwanda kwemaNERVES kwakada kungofanana uye anopfuura 8000 pabhinzi chete paanosanga ese saka tingati uku neuku kune 4000. Murume pachombo pake pane kuma 4000. Kureva kuti mukadzi akabatwa zvakanaka anokwanisa kunakigwa kupfuura murume nokure.
Varumewo chitangai nokufunga manakire anoita mukadzi wako kuti iwe unohwa sei. Chihwisisa kuti unokwanisa kuti mukadzi wako apfuure ipapo kana ukangohwisisana naye maitire aanoda. Anokwanisa kukuda zvokuti anokuitira zvese zvaunoda nokuda kwekunaka kwako iwe murume.
Ndizvo muchiona kuti murume akanatsokoira mukadzi, hazviti kuti mukadzi aite EXPERIENCE iyoyo akanyarara. Zvinenge zvichinaka. Sezvatakambotaura kuti kufema chaiko kunonetsa kana uchiiswa nomurume anokunakira anokuhwisisa, anokuziva.
Nokuda kwekuwanda kwemaNERVES, ukawana murume anokukwiza matinji nebhinzi norurimi gwake manakire acho haatauriki nemashoko okunyora kana okutaura. Zvinongoda uzvihwire wega. Hazvitombodi mazuva ese futi. Ungagara uchirovha basa wakarukutika muviri nenyaya yemaziORGASM asingaiti.
Ngatihwisise kuti vanhu vega vasingahwisisi nyaya yematinji ndeavo vasina matinji, vanova ivo vatiri kuda chose kuti vahwisise kuti vodini kana vava nesu.
Saka tati matinji anoita basa reiko:
1. Kudzivirira zvakaipa zvingapinda pamberi
2. Kunyorovesa pamberi
3. Kunakira mukadzi pakuiswa
4. Kuvaka pamberi kuti pave panova zvapakaita.
Saka nyaya yematinji yataugwa. Chiendai kudzimba mundotaridza kuti kuva nomurume/mukadzi mumba chinhu chakanaka chose. Ngatisununguke pazvinhu izvi nevarume/vakadzi vedu tihwe kunaka kweupenyu tichinazvo mumba pasina zvigwere.
Iwe muridzi wematinji, ratidza murume mabatigwe aunoda kuti matinji ako aitwe kuti unakigwe nazvo. Muratidze zvokuita sezvaunoita kana asipo uri wega. Kana pasina zvaunoita uri wega chimbodzidzira kuzvinakira wega kuti ugokwanisa kudzidzisa murume zvokuita. Matinji ndeenju mese zvokuti uchafadza murue wako chose chose kana akahwisisa kuti akabatabata matinji ako vinokunakira. Iyewo uchaona oita nguva aripo kureva kuti zviri kumufadza. Hino ukangoachengetera mubhurugwa uchasvikepi nawo?
Itiwo kana wasvika kumba kubva kubasa wotanga nokubvisa bhurugwa nokubvisa dhukhu yemazamu, mochitandara mhepo ichipinda zvakanaka murume achipota achihwa hwema hwebhinzi yako zemo richiwanda. Mukadzi ndiwe mukwezvi wemurume. Ndiwe hure remurume wako, ndiwe ghero rake, ndiwe mai vemusha wake, ndiwe FOCUS yemurue wako. Dzidza basa rako nomoyo wese.
Please feel free to check Mai Chibwe VekwaZimuto's blog for the same great content.